इतिहासको दोहोरिनबाट जोगिन स्पेनमा नयाँ कोरोनाभाइरस परिवर्तन गरियो। बेलायत, फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले फेरि नाकाबन्दी नीति खोले
इतिहासको दोहोरिनबाट जोगिन स्पेनमा नयाँ कोरोनाभाइरस परिवर्तन गरियो। ब्रिटेन, फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले नाकाबन्दी नीति फेरि खोले स्पेनमा नयाँ कोरोनाभाइरस उत्परिवर्तित हेलोवीन सत्रमा टिम्सका अनुसार बेलायतले अर्को हप्ता संसदमा मतदान गर्ने छ। महामारी को प्रकोप को कारण ...
गेन्ज शुआ Stले जोड दिए कि नयाँ कोरोनाभाइरसको बिरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लडाईमा, तथ्यलाई, विज्ञान र अन्यलाई सम्मान गर्नुहोस्। मार्च २० मा, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेg्ग शुआले नियमित प्रेस सम्मेलनको अध्यक्षता गरे। एक रिपोर्टरले सोधे, हालसालै केही पश्चिमी विद्वानहरूले भने ...
एक मास्क कति लामो रहन सक्छ? यो मास्क स्टक अप गर्न आवश्यक छ?
एक मास्क कति लामो रहन सक्छ? यो मास्क स्टक अप गर्न आवश्यक छ? नयाँ क्राउन निमोनिया महामारीको कारण, मास्क लगभग आधा बर्ष लगाइएको छ। हालसम्म, महामारी बितिसकेको छैन, केहि केसहरूमा मास्क उचित रूपमा हटाउन सकिन्छ, हामी अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षा छोड्न सक्दैनौं ...